Inona no atao hoe mitsambikina ny antsantsa? | Martech Zone
Inona no atao hoe mitsambikina ny antsantsa?
Asabotsy, Jona 9, 2007 Asabotsy, Jona 9, 2007 Douglas Karr
Iray amin'ireo mahafinaritra izany andianteny henoinao fa mety tsy tsapanao ny tena dikan'izany. Jumping the Shark dia miresaka momba ny fidinana an-dalambe izay raisin'ny tranonkala iray, lamaody, seho amin'ny fahitalavitra, sns. Nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1997 io teny io, rehefa natsangana ny tranokala misy an'io anarana io: Mitsambikina ny antsantsa.
Ity fehezan-teny ity dia fanoharana iray momba an'i Arthur "Fonzie" Fonzarelli nitsambikina antsantsa teny amin'ny seaskis tao anatin'ny andiany iray tamin'ny andian-tsarimihetsika fahita lavitra Happy Days. Ity fizarana ity dia fantatra amin'ny ankapobeny ho ny andian-tsarimihetsika ' tipping point amin'ny lazany tamin'ny 1977. Wikipedia milaza fa ny fanoharana dia nosoratan'ny mpiara-mianatra amin'ny oniversite an'ny lehilahy nanomboka ny tranokala Jump the Shark.
Ka eo no anananao! Mety hiteny ianao MySpace nitsambikina ny antsantsa izao fa efa lasa ny sain'ny rehetra Facebook!
Mitoraka bilaogy an'ity ve ianao?